နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: 9.28 MB ပဲရှိတဲ့ window7final version
ခေါင်းစဉ်က ဘာပေးရမှန်းမသိလို့ ပေးမိပေးရပေးလိုက်တာ အဟဟ. ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ 9.28 MB ပဲရှိတဲ့ window7ဖိုင်ကို Download လုပ်လိုက်ပါ. ဖိုင်ကိုဖြေလိုက်တာနဲ့ 3.49GB ရှိတဲ့ window7Operation system ကိုရလိမ့်မယ်. မယုံမရှိနဲ့နော်. ဘယ်လိုမျိုး ချုံ့ထားတယ် ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လဲ မပြောတတ်ဘူး. ကဲပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် 3.49GB ရှိတဲ့ window7iso ဖိုင်ကို ခဏလေးနဲ့ Download လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေသွားတာပေါ့. ကျွန်တော်ပြောတာ ဟုတ်မဟုတ် Download လုပ်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါ.
Posted by P Kyaw Swa at 8:06 PM